Iqembu lokuhlela le-Technology Guides - Mayelana nathi | Iforamu Yeselula
Iforamu Yeselula iyiwebhusayithi ye-AB Internet. Kule webhusayithi sibhekene nayo yabelana ngalo lonke ulwazi mayelana nezwe lobuchwepheshe: kusuka ezifundweni zezinyathelo ngezinyathelo ngolwazi olusha, kuya ekuhlaziyweni okuningiliziwe kwamagajethi alusizo nelukuluku losuku lwakho nosuku.
Ithimba lokuhlela le-Móvil Forum lakhiwa iqembu le- ochwepheshe bezobuchwepheshe jikelele. Bazonikezela ngemihlahlandlela esesikhathini futhi eqinile yokuthi ungazenza kanjani izinqubo ezithile kukhompyutha yakho, futhi bakusize ngokuthenga izeluleko kwimikhiqizo ehlukahlukene yobuchwepheshe.
Sikushiya nazo zonke ukuze uzazi kancane. Uyemukelwa esithangamini seMóvil futhi siyabonga ngokuba nathi.
U-Emilio Garcia. Umxhumanisi weforamu yeselula nochwepheshe we-SEO bagxile ekunikezeni umuzwa omuhle womsebenzisi. Ukwenza lokhu, uzizungeza neqembu lababhali abangochwepheshe abazobhala ngezindawo zabo zobungcweti.
Ikhompyutha yami yokuqala kwakuyi-Amstrad PCW, ikhompyutha engaqala ngayo ukuthatha izinyathelo zami zokuqala ekusebenziseni ikhompyutha. Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngafika ezandleni zami ezingama-286, engathola ngazo ithuba lokuhlola i-DR-DOS (IBM) ne-MS-DOS (Microsoft) ngaphezu kwezinguqulo zokuqala zeWindows ... ekuqaleni kweminyaka yama-90s, ngiqondise ubizo lwami lokuhlela. Angiyena umuntu ovaliwe kwezinye izinketho, ngakho-ke ngisebenzisa iWindows ne-macOS nsuku zonke futhi ngezikhathi ezithile i-Linux distro ngezikhathi ezithile. Uhlelo ngalunye olusebenzayo lunamaphuzu alo amahle namaphuzu alo amabi. Akekho ongcono kunomunye. Kwenzeka okufanayo ngama-smartphones, noma i-Android ayingcono futhi ne-iOS ayimbi kakhulu. Zihlukile futhi njengoba ngithanda zombili izinhlelo zokusebenza, ngibuye ngizisebenzise njalo.
I-Blogger inentshisekelo ngobuchwepheshe obusha, izimisele ukwabelana ngolwazi lwami ngokubhala okokufundisa nokuhlaziya ukuze abanye bazi zonke izici ezinamagajethi ahlukahlukene. Akunakwenzeka ukucabanga ukuthi impilo yayinjani ngaphambi kwe-Intanethi!
Mhleli ngesikhathi sami sokuphumula. Kubhekwe ngama-smartphone futhi njalo uthola izindlela ezintsha zokuyisebenzisa kangcono, izinhlelo zokusebenza ezintsha noma imidlalo ongabelana ngayo nawe.
Bengilokhu ngisebenzisa ikhompyutha kusukela ngazalwa. Ngivela esizukulwaneni esikhule ngeWindows XP futhi kamuva kwadingeka ngidlule kuVista. Ngisebenzisa ama-macOS nsuku zonke futhi ngigcwele i-Linux. Ngiyakuthanda ukuzihlanganisa nazo zonke izinhlobo zezinhlelo futhi uma bengangibizi ngokuthi ngiyahlanya, bengizophatha i-Android ephaketheni lami langakwesobunxele ne-iPhone engakwesokudla.
Ukushisekela umhlaba wezobuchwepheshe okusetshenzisiwe kunoma iyiphi inkambu ukuze kube lula usuku nosuku. Ukunambitheka kwami ​​kwezinto zobuchwepheshe kuholela ekutheni ngizihlaziye ngezindlela ezahlukahlukene, ngizazi futhi ngikwazi ukuzisebenzisa ngendlela engcono kakhulu, ngaleyo ndlela ngibe nomthelela empilweni yazo esebenzayo isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Umbhali nesihleli esikhethekile kumakhompiyutha, amagajethi, ama-smartphone, ama-smartwatches, okugqokekayo, amasistimu wokusebenza ahlukahlukene, izinhlelo zokusebenza nakho konke okuhlobene ne-geek. Ngangena ezweni lobuchwepheshe kusukela ngisemncane futhi, kusukela lapho, ukwazi kabanzi ngalo nsuku zonke kungomunye wemisebenzi yami emnandi kakhulu.
Kusukela ngisemncane ngithanda ubuchwepheshe, ikakhulukazi lokho okuhlobene ngqo namakhompiyutha kanye nezinhlelo zabo zokusebenza. Futhi iminyaka engaphezu kwe-15 ngiye ngahlanya ngokuthanda i-GNU / Linux, nakho konke okuhlobene ne-Free Software kanye nomthombo ovulekile. Kukho konke lokhu nokunye, kulezi zinsuku, njengoNjiniyela wamaKhompiyutha nochwepheshe onesitifiketi samazwe ngamazwe ku-Linux Operating Systems, bengilokhu ngibhala ngothando futhi iminyaka eminingana manje, ngobuchwepheshe obuhlukahlukene, amawebhusayithi ekhompuyutha kanye nekhompyutha, phakathi kwezinye izihloko. Lapho, ngihlanganyela nani nsuku zonke, okuningi kwalokho engikufunda ngezihloko eziwusizo neziwusizo.
U-Almeriense, ummeli, umhleli, u-geek nomthandi wezobuchwepheshe jikelele. Ngaso sonke isikhathi ngihamba phambili ngokwesoftware nemikhiqizo yehardware, ngoba umkhiqizo wami wokuqala wePC ongiphikisayo wawela ezandleni zami. Ukuhlaziya njalo, ukuhlola nokubona ngokubuka okubucayi lokho ubuchwepheshe besimanje kakhulu obungasinikeza bona, kokubili ezingeni lehadiwe nele-software. Ngizama ukukutshela impumelelo, kepha ngiyawajabulela amaphutha kakhulu. Ngihlaziya umkhiqizo noma ngenza okokufundisa sengathi ngiwukhombisa umndeni wami. Kutholakala ku-Twitter njengo @ miguel_h91 naku-Instagram njenge @ MH.Geek.
Ngisebenza njengothisha wezifundo zokuphatha izinhlelo ze-GNU/Linux ukuze ngilungiselele izitifiketi ezisemthethweni ze-LPIC ne-Linux Foundation. Umbhali we-The World of Bitman, i-encyclopedia yama-microprocessors, namanye amamanuwali wezobuchwepheshe. Ikakhulukazi ngibusa izihloko kumasistimu okusebenza kanye nesakhiwo sekhompyutha. Futhi lokho kufaka phakathi amadivaysi eselula, njengoba angamakhompyutha anesistimu yokusebenza ye-Android.
UJuan Carlos Gutierrez
Othanda ubuchwepheshe. Usosayensi wekhompiyutha wesikhashana onentshisekelo kwizihloko ezahlukahlukene ezihluke kakhulu ezifana ne-office automation, umhlaba we-android, imidlalo yevidiyo kanye nomhlaba wezimoto. Igajethi yami yokuqala engiyikhumbulayo ngeye-Sony HitBit kanye ne-Commodore.
Intatheli ezimele egxile kwezemidlalo nobuchwepheshe. Ngiphinde ngibhale ku-todoandroid.es naku-http://xn--superacin-d7a.es/
Isazi-mlando ngomsebenzi, umthandi weNew Technologies, ngisezinhlelweni zokushintsha kepha noma kunjalo angilahli uthando lwami ngamagajethi, iNew Technologies neFree Software. Eminyakeni yamuva ngizinikele ekujabuleleni nasekuzameni ukusabalalisa igama leFree Software, indlela enzima engisayilandela ...
Ukuthanda ukuzungeza nganoma iyiphi idivayisi kagesi enezinkinobho eziningi kuyisifiso sami. Ngithenge i-smartphone yami yokuqala ngo-2007, kodwa ngaphambi kwalokho nangemva kwalokho, ngithanda ukuzinikela ekuhloleni noma iyiphi igajethi engena endlini. Ngaphezu kwalokho, ngithanda ukuhlala ngihamba nomuntu ukuze ngijabulele isikhathi sami samahhala nangaphezulu.